Light Truck တို႔ Hijet တို့လို ကားလေးတွေ နဲ့ ခရီးဝေး ထွက်သင့်သလား.. ? – Nyi Ma Lay
Light Truck တို႔ Hijet တို့လို ကားလေးတွေ နဲ့ ခရီးဝေး ထွက်သင့်သလား.. ?
By Nyi Ma LayPosted on October 16, 2021
လိုက်ထ ရပ် (Light Truck), Hijet ကားတွေ နဲ့ ခရီးဝေးထွက် သင့်သလား ဆိုတော့လုံးဝမ ထွက်သင့် ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ ဆင်းရဲခြင်း၊ ကားတွေရဲ့ ခံနိုင်အား၊ ဝန်ေ ဆာင်မှုအား၊ အသက် အန္တရာယ် လုံခြုံရေးအား၊ အင်ဂျင်ရဲ့ စွမ်းဆောင်နို င်စွမ်းအား ကို ကားမောင်းသူတွေ ကိုယ်တိုင် မသိနားမလည်ြ ခင်းက အဓိကလို့ ဆိုရပါမယ်။
တချို့ကလ ည်းပြောပါတယ် အလုံ ကားထက်နော က်ပွင့်လိုက် ထရပ်က ဈေးလည်း သက်သာ၊ ဆီလည်းမစား၊ ကားမူးတတ် တဲ့လူတွေလဲ သဘောကျ၊လူ အများကြီး တင်နိုင်တယ်လို့ ပြော ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်ြ ဖစ်တော့လူ့ အသက်ထက်ဘာ မှတန်ဖိုးမရှိဘူး ဆိုတာ သတိ ချပ်သင့်ပါတယ်။
လိုက်ထရပ် ကားတွေနဲ့ လူတွေ မဆန့်မပြဲတ င်ပြီး ခရီးဝေးမထွ က်ကြပါနဲ့ဗျာ။ လိုက်ထရပ်ကားဆိုတာ လူ ၂၀ ကျော် ၃၀ တင်ပြီး ပုဂံဘုရားဖူး၊ ကျိုက်ထီး ရိုးဘုရားဖူး၊ အင်းလေး၊ချောင်း သာအေ ပျာ်ခရီး သွားရတဲ့ ကားမျိုး မဟုတ် ဘူးဆိုတာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသိပေးသင့်ပါပြီ။
လိုက္ထ ရပ္ (Light Truck), Hijet ကားေတြ နဲ႔ ခရီးေဝးထြက္ သင့္သလား ဆိုေတာ့လုံးဝမ ထြက္သင့္ ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံဟာ ဆင္းရဲျခင္း၊ ကားေတြရဲ့ ခံနိုင္အား၊ ဝန္ေ ဆာင္မႈအား၊ အသက္ အႏၲရာယ္ လုံျခဳံေရးအား၊ အင္ဂ်င္ရဲ့ စြမ္းေဆာင္နို င္စြမ္းအား ကို ကားေမာင္းသူေတြ ကိုယ္တိုင္ မသိနားမလည္ျ ခင္းက အဓိကလို႔ ဆိုရပါမယ္။
တခ်ိဳ႕ကလ ည္းေျပာပါတယ္ အလုံ ကားထက္ေနာ က္ပြင့္လိုက္ ထရပ္က ေဈးလည္း သက္သာ၊ ဆီလည္းမစား၊ ကားမူးတတ္ တဲ့လူေတြလဲ သေဘာက်၊လူ အမ်ားႀကီး တင္နိုင္တယ္လို႔ ေျပာ ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္ျ ဖစ္ေတာ့လူ႔ အသက္ထက္ဘာ မွတန္ဖိုးမရွိဘူး ဆိုတာ သတိ ခ်ပ္သင့္ပါတယ္။
လိုက္ထရပ္ ကားေတြနဲ႔ လူေတြ မဆန႔္မျပဲတ င္ၿပီး ခရီးေဝးမထြ က္ၾကပါနဲ႔ဗ်ာ။ လိုက္ထရပ္ကားဆိုတာ လူ ၂၀ ေက်ာ္ ၃၀ တင္ၿပီး ပုဂံဘုရားဖူး၊ က်ိဳက္ထီး ရိုးဘုရားဖူး၊ အင္းေလး၊ေခ်ာင္း သာေအ ပ်ာ္ခရီး သြားရတဲ့ ကားမ်ိဳး မဟုတ္ ဘူးဆိုတာ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ အသိေပးသင့္ပါၿပီ။
Previous post တရုတ်နိုင်ငံ အတွင်းမှာ သာမြင်တွေ့ ရမယ့် ထူးထူးဆန်းဆန်း အရာများ
Next post ရွှေ အကြောင်း လုံးဝ နားမလည်တဲ့သူတွေတောင် အလွယ်တစ်ကူ ရွှေအတု အစစ် ခွဲခြားနည်း